Ndingathanda ukukuxelela ngolo hlobo lweentaka ezithandwa kwilizwe lethu, njengeBritish Fold. Inokwenzeka ukuba, wayedlala le ntlonelo ezintliziyweni zaseRussia ngenxa yokungathobeki kwakhe kunye nokuzimela. Ngoko, umxholo wendaba yethu yanamhlanje yi "Iikati: Unakekele amaFolders Folders".
Ngethuba lokuqala lo buhlanga lwaqatshelwa ngo-1880 eLondon, kwaye i-pedigree yokuqala yakhishwa ngo-1898, kwaye ikati yaseBrithani ibheka, ngenxa yengubo yoboya bayo, njengesibhakabhaka esicacileyo-esasiyimbala. Kwiminyaka elikhulu, kukho utshintsho, kodwa ngoku kubekho abalimi baqaphele kuphela ithoni eluhlaza okwesibhakabhaka.
Inhloko yentaka kufuneka ibe yinto ejikelezekileyo, umzimba-oqinileyo kunye neenkomfa. Kodwa ngelo xesha, imilenze, ngokwemigangatho, ifanele ibe mfutshane, kwaye iinyawo zijikeleze. Ncipha kancane "inqabileyo". Isifuba esinamandla kunye nemilenze emifutshane yakha ngqo le mphumela ye-clubfoot. Ukongezelela, sijonge umgama phakathi kwamehlo, ubukhulu bawo, ukuxubusha kunye nokujikeleza, kwaye, ngokuqinisekileyo, indawo efanelekileyo yeendlebe. Umbala wamehlo akufanele uthathelwe ingqalelo, kuba ukuguqulwa kwe-pigmentation kuguqulwa kunye nexesha le-kitten.
Kubaluleke kakhulu ukubhala ingqalelo kwimo yomphunga. KwiiBrithani zangaphandle, impumlo ibanzi kwaye iqonde kwaye imfutshane. Ibunzi akufanele lithe cwaka xa lijonge kwiprofayili, kwaye isikhumba salo luhlobo luqinile ngokwaneleyo. Ngokubhekisele kwiboya yentaka, unokuyithelekisa kunye neengubo ze-mink, oko kukuthi, iinwele ezimfutshane, kodwa "zinyene". AmaBritoni amancinci athola umbala omnyama ngexesha lokuzalwa, kodwa ngeenyanga ezi-4-6 zobomi umbala wengubo uyatshintsha. Enyanisweni, ixesha elide lihlala emacongeni emsila, kodwa iphinda iphele ngomnyaka wobomi bentwaba.
Ukuba sithetha ngobukhulu beentaka zabantu abadala, kucingwa ukuba lolu luhlobo lukhulu ngobukhulu. Ngokwemigangatho, ubukhulu bomzimba abufanelekanga, kwaye umzimba, ngokumalunga nentloko, akufanele uncitshiswe. Yaye ukuba ukhangele iBritish ukusuka phezulu, iifom zayo ziya kusikhumbuza ixande. Oko kukuthi, ngobukhulu bayo - yonke into imele ihambelane. Isisindo esifanelekileyo somntu omdala sisuka kwi-7 ukuya kwi-9 kg. Lo bunzima bujongwa njengesiqhelo.
Indlu yindlu yakho!
Unyule isilwanyana esithobileyo kwaye wena nentsapho yakho yonke ujabule nayo endlwini yakho, ucinga ngoku i-kitten - ilungu elipheleleyo lentsapho. Yaye, encinci, ayinakukwazi-apho afike khona nalapho unina! Kwaye kunjalo ngokuchanekileyo ngenxa yale nto ayenza ngayo. Kwaye oku kufuneka umncede! Ekuqaleni akufanele umshiye wedwa kwindlu enkulu. Beka kwelinye lamagumbi kwaye akunandaba ukuba kuya kuba yintoni-indawo yokuhlambela okanye ikhikhini, igumbi okanye igumbi lokulala. Makhe ahlolisise aze ashenxise konke okukuyo.
Ukuba indlu inabantwana abancinci, zama ukuxelela ukuba inqanawa ayifanele ithathwe ngesandla kwaye iminywe, kuba isisu sayo siyakwenza ubuhlungu. Unokwakhela kuphela uboya kwaye uthethe naye.
Nangona kunjalo, iphuzu elibaluleke kakhulu - ligqibe ukuba yiyiphi inxalenye yendlu leyo i-kitten iza kulala okanye ibonakalise umsebenzi wayo kumdlalo. Kukhona unokumfaka indlu kunye nesigqoko sokugcoba ukuze angaphathisi iifenitshala yakho.
Intsana encinci iyakhathala ngokukhawuleza kwaye ikwazi ukulala ngokubhekiselele kwindawo apho ivele yanyuka khona. Yaye ukuba ufuna ukuba isilwanyana sakho silale endlwini yakhe nasendlwini yakhe, ukuba unxamnye nokuphumla kwakhe kwipenitshala ephakanyisiweyo okanye kwindawo yakho yokulala - ujwayele ukuba ulandele ngokukhawuleza, ukususela ebuntwaneni. Le yindlela echanekileyo kwimfundo.
Ngoku makhe sithethe ngokubaluleke kakhulu - oku kukukhathalela. Emva koko, uya kuvuma ukuba ulonwabo lomhlobo oluneemilenze ezine lugxininiso lwabaphathi bakhe baya kudala. Kwaye, ngenxa yalo mzekelo, ayilona nto. Kwanele ukunyamekela isambatho semboya kanye ngeveki, ekufuneka idibaniswe ngokucokisekileyo ngetsimbi yesinyithi, ukuba akukho nto kufuneka yenziwe ngolo hlobo okuthiwa "ukukhukhumeza", ekubeni liqothulwa yinto ephantsi.
Emva kokuba kudibaniswe kucetyiswa ukuba kusetyenziswe i-shampoo eyomileyo eboyeni, ukuyixubisa kwiboya eyomileyo, ngaloo ndlela ihluthe uthuli kunye namafutha, ngokungezelela, ukunika umthamo. Ukunyamekela okunjalo kufaka indawo yokuhlamba, ingakumbi ezo ikati ezixhalabisa ngamanzi. Ukuhlamba ama-kittens kwasebuncinaneni akuyimfuneko, kuba, okokuqala, kugxininiswa, kwaye okwesibini, bayakwazi ukujamelana nokunyamekela. Ewe, ukuba awuyikulungiseli intaka yomboniso.
Ukuhlamba ikati kuyimfuneko kuphela kwiimeko ezigqithiseleyo (njengoko kuchazwe ngentla), xa ihlambuluka. Okukhethiweyo kungekhona ngaphezu kwesigamu sonyaka. Ukuhlamba, sebenzisa i-shampoo ekhethekileyo ehambelana nombala wezilwanyana ezithengiweyo kwisitoreji esilwanyana. Ngethuba le nkqubo, zama ukukhusela amehlo kunye neendlebe zepilesi kwi-foam kunye namanzi. Ukushisa kwamanzi akufanele kudlule i-40 * C. Emva kokugqiba ukuhlamba, bhonkotha iBritani kwilweleni kwaye uyifake kwi-litter ukuba yome. Zama ukudala iidrafti kwigumbi. Ukongeza, kanye kanye ngeveki, kufuneka ubonakale ucocekile ezindlebeni, kwaye ukuba uqaphela isulfure, uyisuse nge-cotton swab edibene kwi-hydrogen peroxide.
Ishedyuli yokugonya isilula: isityalo sokuqala iTriket kunye neeveki ezimbini emva kwe-QUADRIKET. Ezi zitofu zenziwe ukwenzela ukukhusela isilwanyana sakho kwiintsholongwane zentsholongwane.
Musa ukulibala ukuba ufuna ukukhuselwa kwi-microsporia okanye i-lichen. Unokusebenzisa iziyobisi, njenge: WAKERMERM-F, POLIVAC, MICRODERM.
Isilwanyana sakho sibheke kakuhle, jonga ukuba kwimiba yakho emva kokulala, akukho ukuqokelela. Bafuna nje ukuba bahlambuluke ngendwangu ebomvu okanye i-cotton disc egciniweyo emanzini.
Namela iingqungquthela zekati yakho. Awukwazi ukunyanzelwa ukuba awufuni ukubona imifuziselo kwifenitshala yakho. Sika 1-2 ngeenyanga malunga nesiqingatha sobude obude, kodwa uzame ukungathinti isikhumba phantsi kwabo, kuba phantsi kwe-claw kukhona imithwalo yegazi.
Kubalulekile ukondla isilwanyana sakho somsebenzi wobomi bakhe kunye nobomi obude. Kwaye kuya kufuneka ucinge ngalo mbuzo ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokuthatha iBritish endlini. Ekubeni lo mfuyo uthathwa njengenqwenelekayo ekudleni kwaye, ngoko kuthetha, iigourmets. Inkqubo yokugaya iikati iyahluke kwinkqubo yabantu, kuba i-categorically ayamkeli i-salted and fried, spicy and peppery, sweet and pickled. Oku kusongela ukungasebenzi kwezitho zangaphakathi, ezifana nesisu, isibindi, iintso. Ngokukodwa, iikati ezitshatywayo zichaphazelekayo. Kwaye ke, akukho zikhetho, njengento yokutya eyomile okanye ukutya kwendalo.
Ukutya okumile. Kucetyiswa ukuguqulela ukutya okunjalo kweekati emva kweenyanga emva kokuzalwa, kodwa kungekudala. Njengokutya kwenguqulelo, kucetyiswa ukuba usebenzise ukutya okubizwa ngokuba ngumntwana, oko kukuthi, ukutya okunomsoco. Njenge-cottage cheese, inyama yenkukhu ephekiweyo, inyama yenkomo, ukutya okusemgangathweni kweekiti ze "Hills" eziqinileyo.
Ngeenyanga ezintathu, ngokukhawuleza uqale ukungena ukutya okunomileyo, uqala ngo-8-10 granules, uxoxwe emthonjeni. Kodwa khumbula ukuba ukwakhiwa kwesondlo kushintsha umbala wezilwanyana: ulwandle lwama-kale, izaqathe kunye nesibindi senza umbala omnyama.
Imveliso yemvelo. Ukuba unayo ixesha kwaye ufuna ukuzithobela isilwanyana sakho kunye neentlobo ze "izitya", ngoko sinokuthi le ndlela iyindlela echanekileyo kunye nokukhetha, kuba ukutya kwendalo kuyimpilo yomhlobo wakho onamagxa amane.
Inyama kunye neenkuku yile mveliso ephambili ekudleni: ukuba inyama yenkomo, ke ingabi mafutha. Unako nokuba neentso, intliziyo, okufuneka usibilise okanye uhlambe ngamanzi abilayo, ngaphambili uthathe izicucu akukho mkhulu kune-2 cm. Unjalo unyango luyimfuneko ukuze ukhusele ikati evela kwi-helminths. Kubalulekile ukubilisa inkukhu ngaphandle kwesikhumba, njengoko umzimba ungayitholi kakuhle. Ukwahlukana kwithambo, uthathe izicucu ezincinci, kuba yiyiphi enye into elula ngakumbi ukuyidla, kwaye isitya siya kulahlwa phantsi kwesicoceko. Amaqanda enkukhu unqweneleka ukupheka kanzima-abilisiwe kwaye uyayinqumla kwiinqununu kwisitya. Kodwa iinqanawa, ngenxa ye-gourmet yakho, unokugubha ngokugqithisileyo, ukuxuba nenkukhu ecosiweyo, inkukhu. Unako ukunika ukutya okusanhlamvu: i-buckwheat, ilayisi, iphekwe kwinqanaba le-2/1.
Uthando lwaseBrithani kunye nemveliso yobisi, enokuthi: i-kefir enamafutha aphantsi, i-yoghurt ngaphandle kweziqhamo zeziqhamo, ukhilimu omuncu u-10%, i-cottage cheese - mhlawumbi i-fat-free. Ukusuka kwimifuno, iBritani ikhetha iklabishi kunye ne-zucchini, iinqwelo kunye namakhukhamba, zombini eluhlaza kunye nefom ephekiweyo. Yondla ikati yakho mhlawumbi amaxesha amathathu ngosuku.
Amanzi. Amanzi ukuba inqanawa idinga ukuthunyelwa kwisitya, eduze kokutya. Ngokukhethekileyo ngamanzi afanayo owaselayo kwaye ucocekile, ucocekile. Ukuba ukondla i-kitten ngokutya okumeleyo, uyazi ukuba ngokutya okunjalo, iBritish isiphuzo kabini amanzi amaninzi.
I-Tableware. Fumana izitya ezimbini zezilwanyana zakho. Enye yokutya, enye yokusela. Ngoku kwintlanzi igcina ukukhethwa okukhulu kakhulu kweziphi izilwanyana ezifuna, ngokukodwa, nezitya. Iibhobho zensimbi ezingenasici, ezineempawu ezikhethiweyo zeerubha ezantsi-oku kukuzinza.
Okanye, mhlawumbi, siya kuthetha ngoku malunga nendlela yokuqhelisela iBriton yakho kwindawo ebizwa ngokuthi "indlu yangasese." Lo mbuzo awunzima xa uyayazi impendulo kuwo. Ikati, ukufika endlwini yakho, ayiyazi ukuba yintoni. ukumnceda ngecebo.
Yenza inqanawa yakho kwindlu yakho, okokuqala, yifake i-tray egciniweyo egcwele i-1-2 cm. Ukuba, ngesizathu esithile, "uya kwindlu yangasese" kwenye indawo - kuya kufuneka ubeke itreyiti ngqo, apho esandula khona ukuya kwindlu yangasese, emthabatha imihla ngemihla umgama omfutshane kwindawo okhethileyo kuye. Lokhu kubonakala ngathi "ukuthambisa" inkabi yangasese.
Ngokuqhelekileyo, iingxaki ezinjalo ziphakama xa inkonti isaselula kakhulu kwaye ayiqhelekanga kwi-tray. Okanye, ukuba wayehlala esitratweni. Kule meko, umonde obaluleke kakhulu kunxalenye yakho kwaye ubhenele kuyo ngaphandle kokunyaniseka, ngaphandle kweyure. Yiba nengqiqo kwaye kuya kubakho. Ungakulibali ukuba iBritani zikhulu kakhulu ngobukhulu kwaye ngoko i-tray kufanele ibe yinto enokuthi "ungene" kwaye "ungcwabe", kwaye akufuneki ukuba uzizwe uxolo ngenxa yokugcwalisa umgca.
Ngokuqinisekileyo, kuzo zonke izidalwa eziphilayo, ubuthongo bubalulekile ebomini. Ngokukodwa kubalulekile kwiikati. AmaBrithani acwangciswe kangangokuthi balala ngobuninzi bemini: ngokuqhelekileyo, bachitha iiyure ezili-16 ephupheni. Incinci i-kitten, ixesha elide elisebenzisa ephupheni. Kwaye ukuba ufuna ukuba inqanawa yakho ikhule ihlaziye, ingabi yingozi, ingabikho ngogonyamelo - zama ukulala ngokwaneleyo. Awudingi ukumvusa, njengoko oku kungakhathaza kamva umlingiswa wakhe.
Apha ke, iikati ezisezantsi, ukunyamekela i-british-lored need requires a lot of strength and, of course, love!
Ubunjani obungathandekiyo beentaka zikaSiam
Indlela yokuhamba inja ngokufanelekileyo
Ngaba kuya kubakho ukutshintshwa kwexesha ehlobo eRashiya ngo-2016? Luphi ixesha lokubukela elitshintshile kwixesha lasehlobo e-Ukraine?
Ndingakhetha njani isikolo?
Unyaka omtsha yeholide yeholide
Isaladi yeRikethi kunye nenkukhu
I-Barbecue Burgers neNgulube
Icocetic for skin soft
Indlela yokugcina ubunzima emva kokutya kwe-mono
Ubunzima bunjani ukwanda ngexesha lokuya esikhathini?
I-Hemangioma kubantwana kunye nonyango lwayo
Yiyiphi ipiyano yokukhetha umntwana?
Umfanekiso omtsha yonke imihla: sifunda ukunxiba iinwele zakho ngeekrayoni zambala
Indlela yokukhetha umntu ngomtshato ophumelelayo